« Lany henatra sy tsy mahataho-tody ! » | NewsMada
« Lany henatra sy tsy mahataho-tody ! »
Ahoana ny fahitanao ny mpanao politika ankehitriny ? « Tena efa lany henatra sy tsy mataho-tody », hoy ny valin-tenin’ilay raiamandreny iray izay. Fomba fijeriny io fa ny fahitan’ny sasany azy, hafa mihitsy. Sao mba ny atao hoe « henatra » mihitsy no tsy fantatry ny Malagasy mpanao politika ? Sa ny fisian’ny « tody » no tsy fantatry ry zareo? Mety ho izay tokoa satria saika saribakolim-bahiny (mpandray baiko sy mpanatanteraka) ny ankamaroan’izy ireo. Ny vahiny, tsy mahalala fa manody ny zavatra rehetra atao fa ny an-dry zareo azo esorina amin’ny « fomba mihaja » ny fahotana mahafaty natao.
… Notohizan’ity Ingahibe avy any Ankaratra ity ihany ny fanazavany : « tsotra ihany ny zavatra nataon’ny mpanjakazaka an-tanin’olona teto amintsika. Nofantariny ny kolontsaintsika. Nopotehiny avy eo. Nopotehiny nanaraka izany koa ny fanabeazana ny zaza malagasy mba hananantsika taranaka tsy vanona. Taona maromaro taty aoriana, natao izay hahafaraidiny ny mpampianatra. Natao izay hampalaina ny mpianatra. Iray amin’ireny ny filazana fa izay tsy maharaka any amin’ny fampianarana ankapobeny, alefa manao teknika ? Paikady mba tsy hananantsika teknisianina io».
« Izaho zara fa nandia ny varavaran-tsekoly ity aza mahatakatra an’izany ka nahoana ireo mpanao politika avara-pianarana sy mirantiranty amin’ny diplaomany ireo no tsy mahalala ny fisian’ireo ? », hoy hatrany Ingahibe. « Satria efa lany henatra sy tsy mataho-tody ! », hoy ihany izy namaly ny tenany.
… Maro ireo zavatra nambaran’ity raiamandreny efa ho 95 ranonorana ity, tamin’izany fotoana izany, fa ny tena naverimberiny : « tsy ho tafarina i Madagasikara raha mbola Malagasy lany henatra sy tsy mataho-tody ary saribakolim-bahiny no mitantana azy. Hiadam-pinaritra kosa ny Malagasy, raha Malagasy mahalala ny fombany, ny taniny, ny kolontsainy no mitondra an’i Madagasikara. Tsy maintsy miainga avy any amin’ny fokonolona anefa ny fampandrosoana ».